I-Top selling steroids Stanozolol yokwakha umzimba AASraw steroid powder
/Blog/Stanozolol/Stanozolol- Top selling steroids for bodybuilding !!!
ezaposwa ngomhla 10 / 15 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Stanozolol. Ibe 1 Comment.
Yintoni i Stanozolol?
Stanozolol, ebizwa ngokuba Winstrol kunye winny, i steroid-androgenic steroid eyenziweyo (Aas) apho kususelwe dihydrotestosterone (DHT) .Stanozolol njenge-steroid steroid, kusetyenziswa ukuze Ukulahlekelwa ngamatye kwaye ukufumana imisipha, isetyenziswe kakhulu njengomlomo ngexesha lemizila yokusika ukulahlekelwa ngamafutha omzimba. Kukho ulwazi olunomdla stanozolol loo nto ayizange okhankanywe, it has ikhono ukunciphisa umgangatho lipoproteins lwetshiphu emsebenzi-mninzi (HDL) nokunyusa umgangatho lipoproteins elisezantsi-mninzi (LDL), loo nto yinto bonke abasebenzisi steroid bazuze fromFor abasebenzisi abaninzi , yindlela engabizi ukuya ku-anavar, kwaye, ngokuqinisekileyo, ifumaneka ngakumbi kwimarike emnyama. Ngenxa yokuguqulwa kwi-A-ring, le steroid eyingqayizivele kakhulu, enezakhono eziqhelekileyo zokusika. Oku kwenza winstrol i-3 yokusika i-steroid kwimarike. Kwimakethi, kukho iintlobo ezahlukeneyo zee-tos, njengefom ye-oarl, ifom ye-injection, okanye i-steroids powder ukusuka.
Yintoni i Stanozolol i powder eluhlaza?
I-Stanozolol powder powder eluhlaza ngumgubo ogqityiweyo we-Stanozolol powder oluhlaza, luhlobo lompu omhlophe,
I-CAS: i-434-07-1, i-Formula ye-Molecular C21H32O3, i-Molecular Point: i-332.48, i-Melt Point: i-172-180 ° C, i-Stanozolol ipowder eluhlaza isoloko igcinwe kwigumbi, kwimarike inani le-Stanozolol powder lincinci kakhulu, ngokuqhelekileyo, i-10g stanozolol I powder eluhlaza ingenza amawaka amacwecwe.
I-Stanazol inikeza ukukhula komzimba
Nangona ezinye i-anabolic steroids zandisa ukwanda kwemisipha ngaphandle kokubangela ukwanda kwamandla, iStanazol inceda ukwenza imisipha enamandla xa idibaniswa nokusebenza kakuhle.
Kwabanye abanomdla kwisakhiwo se-Stanozolol, le steroid inikezela ngendlela efanelekileyo yokungakhangeli nje ukunyusa ubungakanani bemisipha, kodwa kunye namandla omzimba.
stanozolol ukuhla ukusinda
stanozolol ilahleko amanqatha enye inzuzo stanozolol.In iimeko ezimbalwa Winstrol isetyenziswa yedwa, njengoko idibanisa ukuba umjikelo testosterone yi eyingedle enkulu ezandisa ilahleko kwi ipesenti otyebileyo ukwandisa izinga kokugcinwa ndayame mass kwezihlunu.
Enye yezona zinzuzo ezinkulu zeWinstrol kukuba abasebenzisi abakubongayo banokulindela ukujonga okubonakalayo kumzimba xa umzimba weoli uphantsi. Ngokuqhelekileyo isetyenziswe njengesigqirha sokujikeleza, iWinstrol inokunciphisa izinga leepoprostine eziphezulu kunye nokuphakamisa izinga leepoprotein.
Imiphumo emibi yeStanozolol
Iziphumo eziqhelekileyo zemizila ye stanozolol ziquka:
esitsha okanye esiyingozi,
utshintsho kwisifiso sesondo,
utshintsho kumbala wesikhumba, okanye
Kwi-adolescence kunye nabesilisa abadala, imiphumo emibi ye-Winstrol ingabandakanya ukulungelelaniswa rhoqo okanye okuqhubekayo kwipenisi, kunye nokubonakala kwintsimbi. Kubasetyhini, imiphumo emibi yeWinstrol ingabandakanyeka, i-acne, utshintsho kwixesha lokuhamba, okanye ngaphezulu kweenwele zobuso.
Ukusetyenziswa kwe-anabolic steroids ezifana ne-Winstrol inokudibaniswa neempembelelo ezingathandekiyo, ezininzi zazo ezinxulumene nomthamo. Izigulane kufuneka zifakwe kwiqondo eliphantsi kakhulu elinokwenzeka. . Musa ukuthatha le nyilisi ukuba ukhulelwe okanye unokukhulelwa ngexesha lotyando.
Kuyiwaphi uthenge iSanozolol?
Akhil Arya02 / 28 / 2018 kwi-1: 37
mbulela ngokuhlanganyela nathi.
I-Cialis: Indlela Yokuyithatha kwaye Ixesha elide Lilala	Kuphi ukuthenga ubungcwele be-stanozolol powder?